ဗမာတယောက် နိုဗယ်ဆုရတော့မည်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ဗမာတယောက် နိုဗယ်ဆုရတော့မည်….
Posted by kai on Feb 19, 2010 in Business & Economics, How To.., Myanma News, News, Science & Religion, U.S. News, World News | 43 comments
Nobel price Power zero Law
အဲဒီလိုဆိုရမှာပဲ။ ဘယ်နှယ် …အောက်ကသတင်းဖတ်ကြည့်ပါလား။ နိုဗယ်ဆုတင်မဟုတ်..။ ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါ။
ဒါတင်လည်းမဟုတ်..။ နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ခေါ်တွေ့မေးရမဲ့သူဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းပါ။ ဆိုတော့ …ဒီကမ္ဘာမှာ အကျော်ကြားဆုံးသူ ဖြစ်ဦးမယ်ဆိုပါတော့…။
သတင်းက အင်တာနက်ထဲလိုက်နှီုက်ရင်း တွေ့တာပါ။ သုံးသတ်ချက်တွေကတော့ ဖိုရမ်တွေ၊ ဘလော့ဂ်တွေမှာလည်းတက်နေပါပြီ။
ကျုပ်တို့က အမေရိကနေတဲ့ မီဒီယာဆိုတော့ တကယ်သာဟုတ်ခဲ့ရင် အရိုးအရင်းလေးကိုက်ရလိုကိုက်ရငြား…အကူအညီပေးချင်လို့ ဆိုပါတော့။
အဲဒီပညာရှင်(ဦးစိုင်းသန့်ဇင်)ကိုလည်း ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမှန်းမသိတော့ ဒိကပဲ ရေးလိုက်ပါတယ်။
မူပိုင်ခွင့်၊ မှတ်ပုံတင်တာ။ ကမ္ဘာအဆင့်မှတ်ပုံတင်တာ။ နိုဗယ်ဆုတင်ပေးတာတွေ အားလုံး မန္တလေးဂေဇက်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ပါ..လို့။
ပြောရရင် ကျုပ်လည်း လောကဓါတ်ပညာ နည်းနည်းပါးပါးတီးခေါက်မိတော့ အခုဖြစ်စဉ်ကြီးက သိပ်ပံဥပဒေသတွေ ချီုးဖေါက်နေတာမျိုးလို့ ထင်မိပါတယ်။
အခုဟာက ရွက်သဘောင်္ပေါ် ပန်ကာကြီးတင်ပြီး ပန်ကာလေနဲ့ ရွက်လွှင့်သလိုမျိုး ဖြစ်နေသလားပါပဲ။ စွမ်းအင်ကို စိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တာထက် အလိုအလျှောက်အပိုထွက်နေတော့လေ။
သတ္ထုတမျိုးမျီုးကနေ စွမ်းအင်ယူနေရင်တော့ မပြောတတ်ပါဘူး။ သတ္ထုက ယူရေနီယံတော့မဟုတ်လောက်ဖူးထင်ပါရဲ့။
အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ရေနံထုတ်သူတွေလည်း ငတ်ကိန်းပဲ။ အိုဘားမားလည်း အခုဆောက်တော့မယ် ဘီလီယန်ချီတန်တဲ့ နူစွမ်းအင်စက်ရုံစီမံကိန်းတွေ ပိတ်ပစ်ပေတော့ပဲ..။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅နှစ်လောက်က သာမိုဒိုင်ဒနမစ်ရဲ့ ဇီးရိုးလောကို ဆန့်ကျင်တဲ့ နည်းပညာတခု ဆိုဗီယက်(အခုရုရှား) ကတွေ့ဖူးတယ်။
အဲဒါက သံလိုက်မှုန်တွေကို အရည်တမျိုးထဲထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ ရုံးကန်ရင်း မရပ်မနားလှုပ်ရှားနေရောတဲ့။ သံလိုက်က အချင်းချင်းတိုးတွန်းတော့ အပူထွက်တယ်။အဲဒီအပူကို စွမ်းအင်အဖြစ်သုံးတာမျီုးပဲ။
ကားအင်ဂျင်နေရာထားလိုက်ရင် လောင်စာထည့်စရာမလိုတဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်အင်ဂျင်တခုရမယ်ပေါ့။
အဲဒီနည်းပညာနဲ့ ဗမာပြည်ကတောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ရခဲ့သူရှိသေးတယ်။ နောက်တော့လည်း ဘာကဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ။ အသံမကြားရတော့ပါဘူး။အဲဒီဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတဲ့ ဆရာမလည်း အခု ဆန်ဖရမ်စစ်စကိုမှာရှိတယ်လို့ ကြားပါတယ်။
အခုကတော့ နည်းပညာအရာမှာ နောက်တန်းအရောက်လွန်လို့ နောက်ကတွက်ရင် နံပါတ်၁၀ထဲချိတ်နေတဲ့ ဗမာပြည်ကတွေ့ရှိချက်ဆိုတော့ကာ…
ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့လို့ အခုလိုပဲ …ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ဖို့ လေသံပစ်လိုက်ရတာပါပဲ။ ပါမောက္ခတယောက်ရဲ့ နာမယ်ပါပါနေတော့..အရင်တွေ့ရှိထားတဲ့ တွေ့ရှိချက်ဟောင်းမဟုတ်ပဲ..အသစ်တွေ့ရှိချက်လို့ ..သေချာတဲ့ဖက်က တွက်ကြည့်မိပါတယ်။
အဲဒါမျီုးကို သေချာရင် ကမ္ဘာအဆင့် မှတ်ပုံတင်ဖို့ ဆိုတာက..ငွေကြေးတော်တော်ကုန်ပါတယ်။ သူများမခိုးယူနိုင်အောင် မီဒီယာတွေမှာ အရင်လွှင့်တင်ရတာပါ။
အဲ..အဲဒီလို မီဒီယာတွေမှာတင်ရင် ရှေ့က တွေ့ဖူးသူတွေ ဘာတွေထွက်လာတတ်သမို့ ..လုပ်သင့်တာလုပ်ရတာလို့ လည်း မြင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ ..မူပိုင်ခွင့်တင်ရင်လည်း ပန်းဒင်း(စောင့်ရန်) ဆိုတာကြီးနဲ့ နှစ်ရှည်စောင့်ရပြီး မူရင်းထီထွင်ထားသူရှိမရှိ။ ကန့်ကွက်မဲ့သူရှိမရှိ စောင့်ကြရတာမဟုတ်ပါလား..။
အောက်မှာ မူရင်းသတင်းကော်ပီကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး ရှယ်ယာပါချင်ရင် ဆက်သွယ်လိုက်ကြပါဦး။
အတွဲအမှတ် (၂၃ ၊ အမှတ် ၄၅၄)
တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့သည့် လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကို ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြနေစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- မန်းသားလေး
တီထွင်အောင်မြင်ခဲ့သည့် လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကို ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြနေစဉ်။
“ဒီနည်းပညာက ဘယ်သူမှ မတီထွင် နိုင်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော် ကြာအောင် ငွေကုန်ခံ၊ လူပင်ပန်းခံ၊ မိသားစုကို စွန့်လွှတ်ပြီး ရှာဖွေ တီထွင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ လူသားတွေရဲ့ လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်ကို ပြည့်သွားရုံ တင်မကဘဲ ပိုတောင်ပိုပါသေးတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“လျှပ်စစ်မီးထွက်ဖို့ လောင်စာအနေနဲ့ ဘာလောင်စာဆီမှ မလိုပါဘူး။ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်၊ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ ဂက်စ်တွေ အသုံးပြုစရာ မလိုဘဲ ကျွန်တော်တီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာထဲကနေ ထွက်တာနဲ့ လျှပ်စစ်တွေဟာ လိုချင်သလောက် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကို အခုထိတော့ နာမည် မပေးရသေးဘူး။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က လောင်စာမဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နည်းပညာလို့ ပေးထား ပါတယ်” ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က ဆိုသည်။
“ဆရာနဲ့ကျွန်တော် စလက်တွဲတုန်းက ၁၉၉၃ခုနှစ်ကပါ။အဲဒီအချိန်တုန်းက ဆရာမှာ တပည့်မရှိသေးပါဘူး။ ဆရာ အဲဒီစက်ကို တီထွင် နေတုန်းပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း သုံးနှစ်လောက် လေ့လာပြီးမှ ဆရာက သူ့အနားကပ် ခွင့်ပေးတာ။ အဲဒီအချိန်ထိ ကျွန်တော်ဟာ ဆရာ့ဆီက နည်းပညာတွေကို အကုန်မရခဲ့သေးပါဘူး။ ဆရာ့နည်း ပညာကိုလည်း ကျွန်တော်လုပ်စားဖို့ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး။ ဆရာ့ ပညာကိုလည်း ကျွန်တော်လိုက်မမီပါဘူး။ ဆရာဆုံးတော့ ဆရာ့ပညာကို အမွေဆက်ခံမယ့် လူမရှိတာနဲ့ ကျွန်တော်အရဲစွန့်ပြီး လုပ်ခဲ့ တာ။ကျွန်တော် ထင်မထားပေမဲ့ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင်က ပြောသည်။
“ကျွန်တော် ဆရာ့ဆီမှာ လုပ်ကတည်းက ဆရာက နည်းပညာတွေ ပြောပြတယ်။ ကျွန်တော်က တပ်ဆင်ပေးရတယ်။ နောက်ပိုင်း ဒီနည်းစနစ်ရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေကို ကျွန်တော် အကုန်သိ နားလည်တယ်။ ၀ှက်ဖဲတွေကိုလည်း သိလာတယ်။ ဆရာမရှိတော့ ပေမယ့်လည်း နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ဆင်လိုက်တာ လေးလုံးမြှောက်မှာ မီးထွက်တယ်။ အဲ ၁၉၉၉ခုနှစ်ကတော့ လျှပ်စစ် မီးထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက သူ့ဟာနဲ့ သူမဟုတ်တော့ မီးထွက်မမှန်ဘူး။ ဒါကို နည်းပညာတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီး စမ်းသပ်တာရယ် ငွေမရှိတာတွေကြောင့် ပိုကြာ သွားတာပါ” ဟု ရှင်းပြသည်။
“ဓနအင်အားပြည့်စုံတဲ့လူကသာ မတည်ရင်းနှီးငွေ ထည့်မယ်ဆိုရင် ဒီ လောင်စာမဲ့လျှပ်စစ်နည်းပညာသစ်ကို အခြေခံပြီး နောက်ထပ် နည်းပညာများ ထပ်မံပေါ်ထွန်းလာဦးမှာပါ” ဟု ၎င်း က ပြောသေးသည်။
“ပထမလျှပ်စစ်ပေးထားတဲ့ 12KV ကိုလည်း ယန္တရားကြီး လည်သွားတာ နဲ့အနားပေးလို့ရပါပြီ။ Recycle ပြန် သုံးတဲ့သဘောပါ”ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင် က ၄င်းလုပ်ငန်းခွင်ကို ရှင်းပြသည်။
“မကြာခင်မှာ ကျွန်တော် စက်ရုံထောင်မယ်။ ဒီနည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာ့မူ ပိုင်ခွင့်ကို လှမ်းမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို အကျိုးပြုမယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော့် အခန်း ကဏ္ဍတွေ ပြီးဆုံးသွားပြီ။ ဒီထက်ပို ကောင်းအောင်တော့ နောင်လာနောင်သားတွေကိုဘဲ အားထားရတော့မှာပါ” ဟု ဦးစိုင်းသန့်ဇင်ကဆိုသည်။
“ဒီပညာရှင် လောကမှာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ လျှပ်စစ်မှာလော့စ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သီအိုရီ သဘော အရဆို သူ့ကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရဘူး။ ဒါကလည်း သူတီထွင်ထားတာ အောင်မြင်ခဲ့လို့သာ။ သူအခုချိန်မှာ ဒီလို လုပ်ချင်ပါ တယ်လို့ ပြောရင် သူ့ကို စိတ်မှ ကောင်းသေးလားလို့ လူတွေ အထင်သေးကြမှာ အမှန်ဘဲ။ သူလည်း မအောင်မြင်တုန်းကတော့ ကြုံခဲ့မှာပါ။ အခုတော့ သူဒီနည်းပညာကို အောင်မြင်သွားပြီ” ဟု တရုတ်ပညာရှင် တစ်ဦးက ပြောသည်။
ကမ္ဘာရဲ့ အသိအမှတ်ပြုလောက်တဲ့အခြေနေမျိုးရောက်သွားရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့.. အကောင်းဘက်က ကြိုဆိုပါတယ်.. အဲဒီအတိုင်းသာအကြီးကြီးအကောင် ထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရင်တော့ ဦးစိုင်းလည်း Edison of 21 Century ဖြစ်သွားမလားပဲ…
ဗမာတစ်ယောက် ထက် မြန်မာဆိုရင် ပိုမှန် လိမ့်မယ် ဒါထက် ရှမ်းလူမျိုးဆိုရင် အသင့်တော်ဆုံးပဲ။
May beaground-breaking finding.Very glad to hear thataMyanmar is successful in electrical technology which had been largely dominated by Westerners.If it is true,it could beasolution to all problems due to global energy shortage.
ခုလို အောင်မြင်သွားတာ အရမ်းဂုဏ် ယူမိပါတယ် ဒီလိုအောင်မြင်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်တောင်ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ကမ္ဘာ့ အလယ်မှာ
ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲအတွက်မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ဂုဏ်ကိုပါ
ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဦးစိုင်း ကို အရမ်းလေးစားပါတယ်… ဂုဏ်ပြုပါတယ် ဦးစိုင်း
ဦးစိုင်း ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ ……
Sorry, I can not believe.
ငါတို့ မြန်မာပြည်သားတွေဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းလိုမျိုးမစစ်တဲ့ကောင်ကမယုံလည်း
sai fri ဒီကောင် ပိန်းတာလား ဝေးတာလား တော့မသိဘူး
ဖြစ်နိုင်ရင် ” ချာတိတ်တွေ မဖတ်ရန် ” လို့တင်ထားရမယ်
Good new for world but take care everything,can not see the feature.
But really hope truly arise.
တရုတ်ပညာရှင်တွေကိုသွားပြနေပြန်ပြီ၊ ကော်ပီးကူးပြီး မူပိုင်စီးတွားအုံးမယ်။ ၀ှက်ထား ၀ှက်ထား…
သန်းရွှေအိမ်ကိုပေးနေတဲ့ လျှပ်စစ်မီးကို ဒီစက်ခံပြီးအဆ ၁၀၀ လောက်တင်ပေးလိုက်ပါလားလို့… ဒါမှသူတို့မိသားစုတွေ မီးဖုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားအောင်၊
ပြီးရင်အဲဒီအဖုတ်(လူမီးဖုတ်) တွေကို တိနာခေါင်းရှောင်ကြီးစားရအောင် တရုတ်ပြည်ကို အစ်စပို့လုပ်လိုက်…
လျှစ်စစ်ပညာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတီထွင်နိုင်တာအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ အောင်မြင်ပါစေ ဦးစိုင်း
We are really Myanmar.We trust our aim and our target will successful in one day.This is our spirit.Congratulation to U SAI.
Than Htike San says:
ဘွိုင်လာကိုဆူစေတယ်ဆိုတော့ ဘွိုင်လာကို ဘာနဲ့ဆူတာလဲ။
ဘွိုင်လာဆူဖို့ လောင်စာတစ်ခုခုတော့ လိုမှာပဲမလား။
so poor…wasting your time and money for this invention…
နည်းပညာ ပိုင်းမို့ အားလုံးမရေးပဲချန်ထားလား တော့ မသိဘူးနော်။ အခု ရေးထားတဲ့ အတိုင်းသာ ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူးနော်။။။။ ဖြစ်သွားရင်လဲ တော်တော် လေးကို တော်လို့ ပဲဗျ။ စွမ်းအင်နိယာမတွေ တော့ လွှတ်ပစ်ရတော့မယ်။ သီအိုရီတွေ အကုန်မှားသွားလဲ ငါလိုချင်တာ မီးရဖို့ပဲ
aww boiler ko su pho nichrome wire pae` shi tar .
ဂျီအီးက ထုတ်တောင်ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ ဈေးက ကုမဏီကြီးတွေအတွက်ဆိုရင် ၇သိန်းကနေ ၈သိန်းဆိုပါတယ်။ ဒေါ်လှ..နော်..ဒေါ်လှ
Feb 23, 2010 15:55 EST
green business | Tech
The buzz began Sunday when 60 minutes aired an exclusive profile of the alternative energy fuel cell developed by startup Bloom Energy and its CEO K.R. Sridhar (a former rocket scientist) in Silicon Valley. After eight years in the making, the power plant inabox is set to be released Wednesday with California governor Arnold Schwarzenegger and former Joint Chiefs of Staff chairman Colin Powell on hand.
“You’ll generate your own electricity with the box and it’ll be wireless. The idea is to one day replace the big power plants and transmission line grid, the way the laptop moved in on the desktop and cell phones supplanted landlines,” reports CNet News.
What makes this claim to the perfect, zero-emission energy source different? For starters, backing from Walmart, eBay, Google, Staples, FedEx, and hundreds of millions of dollars in investments.
And, the World Economic Forum names Bloom Energy as one of 26 top 2010 Technology Pioneers: Energy and Environment.
But the Bloom Box isn’t cheap. The Daily Tech reports: “Well, $700,000 to $800,000 will buy youa‘corporate sized’ unit… To getaview of the cost and benefits, eBay installed5of the boxes nine months ago. It says it has saved $100,000 USD on energy since.”
In the 60 Minutes interview, Sridhar says his goal is for the price to come down to about $3,000 foraU.S. household withinafew years.
The hype is not new. Since at least 2006, tech industry watchers have kept an eye on Bloom — which has been working on the fuel cell box for more than 8 years.
60 Minutes also ran this Skeptic’s video.
ar` dar gyi sure success phit twar yin
electric flight tway lote pe tot
ar` dar ko flight paw tin pe use lite mal so yin
world fastest flight phit lar lain. mal
pee tot electric car lae` ar` de lo pae` ya lain. mal
u sai lote tha lo thar sure ya mal so yin
brunei ka kabar paw mhar poor sone phit twar pe
brunei ka ရေနံ boss tway
ကျောက်မီးသွေး boss tway tot cry ya tot mal
Gwe Htoo says:
U Sai Thant Zin,
I like to give one suggestion to you. If you are sure about that, you should register at the register office for you invented. Otherwise some body will steal your invented.
Energy cannot be created or Destroyed!!!!!
That’sagreat new.
“ယခုလက်ရှိ နမူနာတပ်ဆင်ထားသော လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်သည့် စက်မှာ Nichrome (နီကရုန်း)ကြိုးများ တပ်ဆင်ထားသည်။ …………………………… စုစုပေါင်း ၀ပ် ၄၃,၀၀၀အား ပြန်လည် ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။”
I got an idea to drawadiagram. So, I just try to drawasample diagram of his brilliant innovation by using XMind (Free Mind_Mapping Software).
Please check out the diagram image below.
kyaw san win says:
ဒီမှာတင်ထားတယ် လောင်စာမဲ့စွမ်းအင် အကြောင်းhttp://www.shanrefugeemalaysia.tk/
၀မ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ ။ နည်းပညာသစ်တွေ ကို ကျွန်တော် တို. ဆီကနေ ထွက်တာဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာ ပါ
Dear Saya Kyaw Win& Sai Thant Zin !
I would like to thank your strong believe mission and all of these aspect of your things. GOD BLESS you and your nice JOB. We hope that it can bring to global trend with your JOB not just your win but Myanmar also had already reborn with your Job . Saya Sai you can win that because you already made with special spirit and every scholar will listen your nice song any corner of the world . This is why we will pray for your Job.
Dear U Sai Thet Sin, I am so proud of you and esp with your effort and invention. I hope, you will enjoy the fruits of your success in return. With all due respect Uncle..If your invention comes to reality and was put into practice, please share with the right people who really look after our nation(Brumese). And, I wish there is no barriers along your way to uprise what our people really deserve.Wish you with all the best of luck, Uncle..
i want to know that where can i find this project at another website
မယုံရခက်ယုံရခက်နဲ့ ယုံချင်ပါတယ် အားလုံးအတွက်။
တကယ်လည်း ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်…
Good news for oppressed of Burma. If we can remove Than Shwe from power using superpower of this invention, fantastic. Burmese people in Burma had to stay in the dark as if they were punished by Than Shwe for disobedience. This machine can be solution for people in Burma. I will be very happy if Burmese people are liberated from the dark age of murderous Than Shwe.
အင်တာနက်သတင်းဆိုတာ မြန်ဖို့စိတ်ချရပေမယ့်မှန်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်သေးတော့
မြန်မာ့ ရာဇ၀င်မှာတော့ သူရဲကောင်းတွေ ဟာကျဆုံးခဲ့ရစမြဲပါနော် သူ့ ကိုသူရဲကောင်းလို့ ထင်ရင် နေရာပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့ သူကောင်းစားသွားမှာပါ
ဒီစကားကိုပြောရတာ အရမ်းဝမ်းနည်းမိပါတယ် ဘယ်သူ့ ကိုမှ့့့ 
Anyone who is responsible for that shameful, nonsense thing should apologize the audience and remove that topic please!!!!
How is the progress of this machine? I believe it’sahoax.
Many people had tried such machine called perpetual machine and so far none had succeeded.
Visit below sites for more information. Their inventions are similar to U Sai Thant Zin’s machine.
၂၀၁၀ ဆိုတော့.. ၊ ကျုပ်ဖြင့် မန်းဂေဇက် ရှိမှန်းကို မသိခဲ့သေးတဲ့အချိန် ၊ အခုမှပြန်ဖတ်ကြည့်မိတော့ ၊ လွတ်လပ်စွာ ဆဲခွင့် ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်ပါကလား
လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးက ဟိုပြော ဒီပြော တောင်းပန်စရာမလိုလောက်ဘူးနော်။